Miha mahantra hatrany i Madagasikara Mitotongana ny sandan’ny Ariary
Nahatratra 3736,67 Ariary ny sandan’ny 1 euro teo anivon’ny Marché Interbancaire des Devises (MID) omaly alatsinainy 20 septambra. Midika io fa latsaka dia latsaka ny ariary raha mihoatra amin’ny vola euro izay anisan’ireo vola vahiny handrefesana ny ariary ao amin’ny MID miaraka amin’ny dolara Amerikanina.
Fivahiniana ara-toekarena natao tany Canada Afa-po tanteraka ireo mpandraharaha Malagasy
Tontosa soa aman-tsara ny 21 ka hatramin’ny 28 oktobra lasa teo tany Canada ilay fivahinianana ara-toekarena sy ara-barotra nokarakarain’ny tranoben’ny varotra eto Madagasikara sy any Canada.
OPENFLEX Fitantanana azo antoka ho an’ny orinasa
Ny fanodinkodinana amin'ny lafiny rehetra dia trangan-javatra iray hita matetika eny anivon’ny orinasa maro eto Madagasikara.
Andron’ny indostria aty Afrika Hanohana akaiky ny hetsika ny BNI Madagascar
Notanterahina nanomboka omaly alatsinainy 20 novambra ny fankalazana ny andron’ny indostria aty Afrika.
Kary Rosin mpandraharaha ara-lodsia “Vonona hanaja ny fenitra iraisam-pirenena izahay”
Mpandraharaha ara-lodsia Malagasy amin’ny dimy nanao ny fanondranana lodsia mena amin’ny alalan’ny fiaramanidina Atoa Kary Rosin. Raha ny fanazavany dia “nisy faharatsiana ny lodsia tamin’ity taom-piotazana 2017 ity noho ny fiovaovan’ny toetr’andro ka nahatara ny orana.